Fiber Optic PLC mahwanda Vagadziri & vanotengesa - China Fiber Optic PLC mahwanda Fekitori
Fiber optic PLC mahwanda, anonziwo planar waveguide ciruit mahwanda, chishandiso chakagadzirwa kupatsanura imwe kana maviri mwenje matanda akajeka matanda akaenzana kana kusanganisa akawanda mwenje matanda kune rimwe kana maviri mwenje mwenje. Icho chinhu chakakosha uye chine akawanda ekuisa uye ekuburitsa zviteshi zvinoshandiswa zvakanyanya mu passive optical network (GPON, FTTX, FTTH).
PLC mahwanda anopa yakaderera-mutengo mwenje yekuparadzira mhinduro ine yakakwira kugadzikana uye kuvimbika, iyo yekupedzisira yakavhara huwandu hwezvibatanidza ndeye 1 * 2, 1 * 4, 1 * 8, 1 * 16, 1 * 32, 1 * 64 SC / APC kana SC / UPC.
Jera inopa fiber optic waya mahwanda anosanganisira:
1) Fiber optic PLC Makaseti mahwanda
2) Mini PLC Makaseti mahwanda
3) PLC mahwanda, ABS module
4) Bare fiber PLC kutsemura, isina blockless PLC kutsemura）
Jera kaseti PLC mahwanda nekuita kusingaite, low optical Kuisa kurasikirwa, kuderera kwepararization kunoenderana nekurasikirwa, kuvimbika kwakanyanya uye kugadzikana, kwakakwirira kwezvakatipoteredza uye zvemagetsi maitiro, uye nekukurumidza kumisikidza.
Takatarisana nekuenderera mberi kwekuwedzera kwekuda kwepamusoro bandwidth, isu tinoda kumisikidza kumisikidza, yakavimbika PLC mahwanda ekupa fiber optic zvinongedzo panguva yeFTTX nePON network yekuvaka. Iyo PLC yekuparadzanisa inobvumira vashandisi kushandisa imwechete PON network interface, inowedzera iyo mushandisi kugona kweiyo Optical fiber network, uye inopa yakanakisa mhinduro kune network vavaki.
Ndapota inzwa wakasununguka ton taura nesu kuti uwane ruzivo rwemangwana.
Mini PLC Makaseti mahwanda
Fiber optic PLC Makaseti mahwanda